डिभोर्स पछि पहिलोपटक मिडियामा आएकी प्रतिभाले रुँदै भनिन्, “मलाई बखतले मोहनी मन्त्र लगाएर लगेको रहेछ ।” (भिडियो हेर्नुस्) – NepalajaMedia
February 24, 2021 121
केही समयअघि युट्युबमा एक जोडी खुब भाइरल भएका थिए । तर यी भाइरल जोडी बखत बहादुर बिष्ट र प्रतिभा बिष्ट आजभोली त्यति देखिएका छैनन् । यी दुईको अचम्मको जोडि भएका कारण यी दुई सबैको नजरमा पर्न सफल भए ।
बखत उमेरमा २६ वर्षभएतापनी उचाईमा उनी निकै होचा छन् । उनका तुलनामा उनकी श्रीमती उमेरमा कान्छी तर बखतभन्दा ठूली छिन् । यी जोडीहरुले भागेर विवाह गरेका हुन् ।
बखतलाई पहिले-पहिले सानो भनेर सबैले हे’प्ने गर्थे तर प्रतिभाले त्यस्तो केहि नसोची बखतलाई साथ थिइन । केही समय अघि यी दुईबीच अथाह प्रेम रहेको थियो । यी जोडीले केही म्युजिक भिडियो समेत खेलेका थिए । तर अहिले बखत आफ्नी श्रीमतीले कु,ट,पि,ट गरेको भन्दै मिडियामा आएका थिए ।
त्यसपछि फेरि पछिल्लो पटक प्रतिभा पनि मिडियामा आएर धेरै खुलासा गरेकी छिन । अब हेर्नुस प्रतिभाको बयान
Prevमेरो छोरिलाई बचाइदिनु होला ,कठै गरिब भएपछि अस्पतालले पनि उपचार दिदैन रैछ (भिडियो हेर्नुस्)
Nextहरेक दिन कपाल नुहाउने गर्नुभएको छ ? यी गल्ती नगर्नुहोस्, नत्र पछुताउनु पर्ला
श्रीमतीले सहन नसक्दा…..
एक वर्षको गहन र गोप्य अनुसन्धान पछि फिल्मी शैलीमा टुंगिदैछ निर्मला पन्त प्रकरण ! अभियुक्त चाँडै सार्वजनिक गर्दै
अब घरजग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा लागु भयो यस्तो नयाँ नियम